Skål Thailand dia manome kitapo ho an'ny sekoly mahantra any Honduras
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Honduras » Skål Thailand dia manome kitapo ho an'ny sekoly mahantra any Honduras
Skål Thailand, nanatrika ny Kongresy Eran-tany 2019 ary te hamaly ny antony sahirana, dia naka sekoly mahantra tany Honduras hotsidihina. Nitsidika ny sekoly ny mpikambana rehefa nijanona tao Roatan nandritra ny faha-80 Skal Kaongresy eran-tany ao amin'ny sambo Symphony of the Seas mba hitondra ny fanomezana.
Mpikambana Skål avy any Thailand no nanome fonosana maimaimpoana ho an'ny ankizy mpianatry ny tanàna mahantra 120. Backpack dia natolotry ny backpacksusa.com.
Raha nilaza ny heviny momba ity fandraisana andraikitra ity ny filoha Skål Thailand Wolfgang Grimm dia nilaza hoe:
"Ity no fomba hanampiantsika ireo ankizy sahirana mandritra izao fotoan-tsarotra izao any amin'ny toeran-tany hotsidihin'ny kongresy."
Betsaka ny fianakaviana izay tsy afaka mividy kitapom-batsy na enta-mavesatra vaovao ho an'ny zanany. Mandefa ny zanany any am-pianarana ny zanany miaraka amin'ny kitapom-batsy efa tonta na rovitra izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahatokisan-tenany sy ny fahavononany handray anjara am-pianarana miaraka amin'ny fomba fijery tsara.
Ny tanjon'ny Skål dia ny hanomezana kitapom-batsy vaovao sy mangatsiatsiaka miaraka amina fitaovam-pianarana ao anatiny ireo ankizy ireo. Ny vola tahirin'ny ray aman-drenin'ireto ankizy ireto dia afaka alefa any amin'ny filàna hafa toy ny fanamiana, kiraro, ary filàna hafa, amin'ny tranga sasany, ny sakafo sy ny zavatra hafa dia raisintsika ho zava-poana.
“Mihoatra ny 100 ny endrika faly mitsiky amin'ny ankizy no faly nahita azy. Manana kely dia kely amin'ny fiainana izy ireo; lakilen'ny fahombiazana ho avy ny fanabeazana, ary ny loha kely manomboka amin'ny fanomezam-pahasoavantsika fitiavana nomen'ny olon-tsy fantatra dia mety hitondra fiovana lehibe. Ity dia fanomezana kely natolotray avy any Thailandy, ”hoy ny filoha lefitry ny Thailandey Kevin Rautenbach.
Hackathon voalohany natolotry ny Travel Forward ao amin'ny ExCel London
Crimea sy UNWTO: fandaharam-potoana miafina?